နားထောင်တိုင်းလည်း မကြားပါ။ ကြားတိုင်းလည်း နားမလည်ပါ။ (၂) - Myanmar Network
နားထောင်တိုင်းလည်း မကြားပါ။ ကြားတိုင်းလည်း နားမလည်ပါ။ (၂)
Posted by Kyaw Win Tun on March 26, 2012 at 11:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတို့ ၏ အသံထွက်တွင်ရှိသည့် ဖိသံstress သဘောကို “နားထောင်တိုင်းလည်း မကြားပါ။ ကြားတိုင်းလည်း နားမလည်ပါ” ဆောင်းပါးတွင်ပြောခဲ့ပါသည်။ စာကြောင်းတွင်ပါသည့် ဖိသံသဘော ကို ဆက်ပါ မည်။
စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုရွတ်ဆိုရာတွင်လည်း ဖိသံပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် I went to school. ကိုပြောရာတွင် went နှင့် school ကို အခြား I နှင့် to တို့ ထက် ပိုရှည်ရှည်နှင့် ကျယ်ကျယ် ပြော လေ့ရှိပါသည်။ အများအားဖြင့် နာမ်၊ ကြိယာ စသည့် အချက်အလက်ကိုဖော်ပြသည့် content words ဟု ပညာရှင်များကခေါ်ကြသော စာလုံးများကို နာမ်စား၊ ၀ိဘတ်စသည့် စာကြောင်း တည် ဆောက်သည့် function words ဟုပညာရှင်များကခေါ်ကြသော စာလုံးများထက် ပိုပြီး ကျယ်ကျယ် နှင့် ရှည်ရှည် ရွတ်တတ်ကြပါသည်။ အထက်ပါစာကြောင်းတွင် ဘယ်ကိုသွားသည် ဆိုသည့် အချက်အ လက်ကို အသားပေးပြီး wentနှင့် school ကို ဖိသံဖြင့် ထွက်ပါသည်။ ဤသဘောကို သိလျင် နား ထောင်ရာတွင် ဖိသံနှင့် ထွက်သည့်စကားလုံးများကိုပိုပြီး သတိပြုလျက် ကြား အောင်နား ထောင် သင့်ပါသည်။
နားထောင်ကျင့်နည်းသေးလျင် မည်သည့် စကားလုံးများကို ဖိသံနှင့် ထွက်သွားသည်ကို အလွယ်တကူဖမ်းမိဦးမည်မ ဟုတ်ပါ။ ထို့ ပြင် စာကြောင်းများတွင် စကားလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကို တစ်ဆက်တည်း ရွတ်သွားသည်ကိုလည်း နားယဉ်ဦးမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့် အကြားစွမ်းရည်တိုးတက် လိုလျင် များများနားထောင်၍လေ့ကျင့်ခြင်းမှတပါး အခြားမရှိပါ။
သို့ သော် အကြားစွမ်းရည်စတင်လေ့ကျင့်သူများအတွက် နောက်ထပ်အခက်အခဲများရှိတတ်ပါသည်။ အသံထွက်ကို ဖမ်းမိသော်လည်း စကားလုံးကို မသိမမြင်ထားဘူးလျင် ဘာဆိုလိုသည်ကိုသိမည်မဟုတ်ပါ။ စကားလုံးကို မြင်ထားဘူးသော်လည်း ၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် သုံးပုံသုံးနည်းကို မသိထားလျင်လည်း ကြားသာ ကြားလိုက်သော်လည်း နာလည် မည်မဟုတ်ပါ။
ထို့ ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဝေါဟာရကြွယ်အောင် အားထုတ်ထားသင့်ပါသည်။ အဖတ်စွမ်းရည်လေ့ကျင့်ရာတွင် တွေ့ ရ သော ဝေါဟာရအသစ်များ၏ အသံထွက်များကိုသိပြီး ကိုယ်တိုင် ထွက်နိုင်သည် အထိ အားထုတ်သင့်ပါသည်။ သို့ မှ သာ နားထောင်ရာတွင် ထိုစကားလုံး အသစ်ကို ကြားသည့်အခါ၌ “မိ” နိုင်ပါမည်။ အဘိဓာန်ပါ အသံထွက် သင်္ကေတ များဖြင့် စကားလုံးတိုင်း၏ အသံထွက်ကို သိ နိုင် ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အွန်လိုင်း အဘိဓာန်များတွင်လည်း အသံ ထွက်အမှန်ကို နားထောင်နိုင်ပါသည်ထို့ ပြင် စကားလုံးအသစ်၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် သုံးပုံသုံးနည်းကိုလည်း တစ်ပါတည်း သိအောင်ကြိုး စား ရ ပါမည်။ ဝေါဟာရကြွယ်ဝခြင်းက စာဖတ်ခြင်းနှင့် နားထောင်ခြင်းကိုများစွာ အထောက်အကူ ပေးပါသည်။
အကြားစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ရာတွင် ဝေါဟာရအခက်အပြင် တွေ့ ရမည့် အခြားအခက်တစ်ခုမှာ မြန်နှုန်း နှေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ နှေးနှေးပြောသည့် အပြောကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလေ့လာသူများ အဖို့ပို၍ နားလည်နိုင် မည်ဆို သည်မှာ ပြောဖို့ လိုမည်မထင်ပါ။ ထို့ ကြောင့် နှေးနှေးပြောသည့် စကားပြောမျိုးကိုနားထောင်ပြီး စတင်လေ့ကျင့်သင့် ပါ သည်။ ၎င်းစကားပြောမျိုးကို အင်တာနက်တွင်ရှာနိုင်ပါသည်။ဂူဂဲလ် Google စာမျက်နှာ search box “ ရှာကွက်”တွင် Listening Exercises for English Language Learners ဟုစာရိုက်ရှာကြည့်ပါ။ ဘီဘီစီ ဗီအိုအေ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ စာအိမ်များ တွင်လည်း နှေးနေးပြောထားသည့် စကားပြောများကို နားထောင်နိုင်ပါသည်။
၎င်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ စာအိမ်များ၏ အားသာချက်တစ်ခုမှာ ပြောသည့် အကြောင်းကို မှတ်တမ်း တင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ အသံဖိုင် စာရွက်ပေါ်တွင် Text ဟူသော အမှတ်အသားတစ်ခုရှိနေတတ်ပြီး ၎င်းကို ဖွင့်ဖတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထို စာဖိုင်အများစုမှာ PDF ဖိုင်များဖြစ်တတ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် စာ ဖိုင်ကိုဖတ်လျက် နားထောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ နောက် စာဖိုင်မပါဘဲ အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ် ကြိမ် နားထောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါထွက်သွားသည့်အသံထွက်များ၊ အကြောင်းအရာများ နှင့် အသံ နေ အသံထားများ accent ကိုပါ လွယ်လင့်တကူ ကျက်မိ သွားပါလိမ့်မည်။နောက်ပိုင်း အ ကြား စွမ်း ရည် တက်လာသည့်အခါ စာဖိုင်မပါဘဲ ကြား နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင် မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါသည်။ အပြင်လောကတွင် နားထောင်သည့်အခါ မည်သည့် စာဖိုင်မှမပါပါ။ ဘယ်သူမှ နှေးနှေးမပြောပါ။ ထို့ ပြင် ဘာသာစကားလေ့လာသူများအတွက် စီစဉ်ထားသော သင် ခန်း စာများ တွင် ပြော ထားသည့် အပြောသည် အပြင်လောကတွင်ပြောသည့် အပြောများနှင့် ထပ်တူမကျပါ။ထို့ ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ထားခြင်းမျိုးက အကူအညီပေးနိုင်ပါမည်လားဟု မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါသည်။ အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်ဟု ဘာသာဗေဒပညာရှင်များက ဆိုကြပါသည်။
သို့ သော်ထိုပညာရှင်များစကားဖြင့် မကျေနပ်သင့်ပါ။ ထိုသို့ သင်ခန်းစာ နားထောင်ခြင်မျိုးကိုလေ့ကျင့်နေ သည့် တစ် ချိန်တည်းတွင် နေ့ စဉ်အပြင်လောကရှိ နားထောင်စရာများကိုလည်း တစ်နေ့ နည်းနည်း စီ နားထောင် သွားသင့်ပါ သည်။(ဥပမာ သတင်း ရုပ်ရှင်) သို့ မှသာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး စကား ပြောသောအခါတွင် လည်းကောင်း ရုပ်ရှင်ဂီတ စသည့် ဖျော်ဖြေစရာများနှင့် သတင်း မိန့် ခွန်းစသည့် အချက်အလက်တို့ ကိုနားထောင်ရာ တွင် လည်း ကောင်း အမှန်တကယ်ကြားပြီးနားလည်နိုင် အောင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Permalink Reply by 3a4a67odch8lc on March 28, 2012 at 12:33
Permalink Reply by San San Yee on March 28, 2012 at 13:15
That is really helpful to me. Thanks you very much indeed.
Permalink Reply by 1rdpbyr6e0eyj on March 28, 2012 at 13:26
Permalink Reply by hlahla on March 28, 2012 at 14:31
Permalink Reply by Ratan Biswas on March 28, 2012 at 14:38
Permalink Reply by shaahfirzir on March 28, 2012 at 18:23
Permalink Reply by shaahfirzir on March 28, 2012 at 18:30
Permalink Reply by naing moe aung(Leo) on March 28, 2012 at 23:42
thanksalot Ko Kyaw.........
and can i have some more please !
Permalink Reply by Wai Yan Myint on March 29, 2012 at 5:39
Permalink Reply by Myat Thu on March 29, 2012 at 14:30
Permalink Reply by Myat Thu on March 29, 2012 at 14:47
Permalink Reply by chocholinn on April 3, 2012 at 16:49